Politika · Marsa, 2022 · Global Voices teny Malagasy
Politika · Marsa, 2022
Tantara mikasika ny Politika tamin'ny Marsa, 2022
Khoukham dia isan'ireo nanangana ny Free Laos, tambajotra iray misy ireo Laosiàna mpiasa ao Thailandy mitolona ho an'ny zon'olombelona ao amin'ny firenena niaviany. Notadiavin'ireo manampahefana Thai izay handroahana azy hody.
Ahoana ny fomba fahitan'ireo ‘Myanmar roa’ ny fanafihan'i Rosia an'i Okraina
Azia Atsinanana 25 Marsa 2022
"Taratry ny fizarazaran'ny sata ara-politika sy ara-diplaomatika ao Myanmar ireo fomba roa samihafa ireo."
‘Mbola henoko ny feon'izy ireo': Vehivavy telo niasa ho an'ireo marefo indrindra tao Jamaika
Karaiba 24 Marsa 2022
Manome voninahitra ireo vehivavy telo izay nitsangana hiaro ny zon'ireo vehivavy namana sy ireo olona marefo hafa, na tao Jamaika na manerana an'i Karaiba.
Azia Atsinanana 19 Marsa 2022
Ry zareo Rosiàna miha-manakaiky, milefa an'i Okraina kosa ry zareo Nepaley
Azia Atsimo 17 Marsa 2022
Raha i Rosia manahi-bohitra ao Okraina, ireo Nepaley mpila ravinahitra kosa mandositra; ny sasany tsy naninona, saingy ankamantatra ny hoavin-dry zareo